आज वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको जन्मदिन, कति वर्ष लागे?
हरिवंश आचार्य (वि.सं. २०१५) एक अभिनेता हुन्। उनी सबै भन्दा बढि सफल नेपाली हाँस्य कलाकारहरू मध्येमा पर्छन्। यिनी अभिनय तथा गायनमा धेरै कुशल छन्। उनी “मह जोडी” नामको जोडी मध्येका जोडी हुन्। उनका जोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ हुन्।
उनका साथीहरू अङ्ग्रेजी स्कुल जान्थे। उनलाई पनि अङ्ग्रेजी पढ्ने रहर थियो। टुपी पाल्नुपर्थ्यो। उनलाई भने टुप्पी नराख्न र बङ्गाली कट कपाल काट्न मन लाग्थ्यो। सधैं टोपी लगाएर हिँड्नुपर्थ्यो। सबै कुरा उनका इच्छाअनुसार थिएनन्। घरमा गोलभेडा, लसुन र प्याज खानु हुन्न भन्ने मान्यता थियो।
आमाको निधनपछि उनी बढी स्वतन्त्र भएँ। अङ्ग्रेजी पढ्ने इच्छा पूरा हुने भो जस्तो लाग्यो। उनी पद्मोदय स्कुलमा कक्षा ५मा पढ्न थाले। आफैं गएर भर्ना भए। वर्षभरिको ‘फी’ पनि पसलमा बाँकी राखेजस्तो राख्न मिल्थ्यो। उनले उधारोमा पढे। पास भए। स्कुल नै छाडे। शान्ति विद्यागृह गए। सरहरूले के-के सोधेर कक्षा ६मा पढ्न मिल्छ भने। त्यहाँ पनि ‘फी’ नतिरी उधारोमा पढे। कक्षा ६मा पास भए। कक्षा ७ देखि पद्मोदयमा नै पढे। २०३२ सालमा पद्मोदयबाट एसएलसी दिए। २०३५मा थर्ड डिभिजनमा पास भए।
नक्साल बस्दा नाटककार जितेन्द्र महत ‘अभिलाषी’ सधैं नक्सालमा हिँड्थे। उनलाई भेटेर नाटकमा खेलाउन आग्रह गरे। उनले नाचघर लानुभयो। त्यहाँ हरिले नाटक खेल्न थाले। त्यहाँ उनलाई तलब १ सय ७५ रूपैयाँ दिन थालियो। नाचघरमा जान थालेपछि भैरव दल छाडे। नाचघरमा राजारानी र राजपरिवारका सदस्य नाटक हेर्न आउँथे। नाचघरमा मैले ‘अमरसिंह’ नाटकमा गोली लागेको अभिनय गरे।
राजाका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले नाचघरका मुख्य प्रबन्धक इन्द्रप्रसाद काफ्लेलाई, ‘यो केटोको हो ? निकै राम्रो अभिनय गर्दो रहेछ,’ भन्नुभएछ। मुख्य प्रबन्धक काफ्लेले उनको तलबमा एक सय थपिदिए। त्यसपछि ‘हाम्रो पनि कथा छ’ भन्ने नाटकमा हाँस्यपात्र बने। उनको अभिनय रानी ऐश्वर्यलाई खुब हाँस उठेछ। यो देखेर मुख्य प्रबन्धक काफ्लेले मेरो तलबमा फेरि एक सय थपिदिनुभयो।